LDRS အချစ်က တကယ်ပဲ မြဲနိုင်ပါ့မလား?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်မေးပြီးမှ သူနဲ့ချစ်သူတော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါ။
ကိုယ်နေထိုင်ရာ နေရာနဲ့ ဝေးကွာလှတဲ့ နေရာတစ်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူတစ်ဦးကို ချစ်မိတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို စိုးရိမ်ပူပန်နေရတာကတော့ သူနဲ့ကိုယ် ရေရှည်မြဲပါ့မလား ဆိုတာပဲ။
Long Distance Relationship (LDRS) တွေဟာ မြဲတာတော့ ရှားလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားလည်မှုတွေနဲ့ လက်တွဲပေါင်းဖက်သွားကြတာတွေလည်း မြင်ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ အဝေးကလူတစ်ယောက်နဲ့ အချိန်အကြာကြီးထိ ချစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကတော့.....
အဝေးကလူတစ်ယောက်ကို ချစ်သူတော်ဖို့ဆိုရင် ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ထင်ထားတာထက် အများကြီး ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်မေးပြီးမှ သူနဲ့ချစ်သူတော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါ။
၂။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး
အချိန်ကွာခြားမယ်။ နေရာဒေသ ကွာခြားမယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမြဲမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကို ကိုင်ကွယ်တတ်မယ်ဆိုရင် LDRS ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်စရာတော့ မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ အဝေးကလူကို ချစ်ရတာ ဒီလောက်ပင်ပန်းသားနဲ့ ကိုယ်က ဘာလို့အနီးကလူကို မချစ်နိုင်တာလဲ? အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ သူ့ကို သိပ်ချစ်မိလို့ပါ။ အချစ်က သတ္တိတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိတာမို့ တကယ်သာချစ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းက နီးဖို့ပဲမဟုတ်လား။
၃။ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကျော်လွှားပါ
သူနဲ့ကိုယ့်ကြားမှာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာတွေ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကလည်း နားလည်မှုတွေ ပေးနိုင်ရဦးမယ်။ လိုအပ်လာရင် အကြံဉာဏ်တွေလည်း ရယူပါ။ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကျော်လွှားလိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူလည်း သူ့နေရာမှာနေရင်း၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်နေရာမှာနေရင်းပဲ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းရမယ်။ ကိုယ်အဆင်မပြေချိန်မှာ သူရောက်မလာနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေရှင်းလိုက်စမ်းပါ။ သူ့ကိုလည်း ပစ်မထားနဲ့။ ကိုယ်လည်းပဲ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်လျှောက်ရင် နှစ်ယောက်သား ဆုံမှတ်တစ်ခုကို ရောက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေပြေအနေအထားတွေနဲ့မို့ စိတ်ချမ်းသာရနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးက အရွယ်ရောက်နေကြပြီလေ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖေးမကူညီပေးရမယ့်အစား သူအဆင်ပြေနေတာကို အဝေးကနေ ဂဂျီဂဂျောင်ကျမနေနဲ့တော့။ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လျှောက်သွားတာမျိုးတွေကို ကိုယ်က ပိတ်ပင်လို့မရဘူး။ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားလိုက်။ အထင်လွဲတာတွေ၊ သံသယတွေ ရှိလာရင်လည်း ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။ စိတ်ထဲမျိုသိပ်ပြီး အညှိုးအတေးမထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ရှေ့ဆက်ချစ်နိုင်မှာ။